Qodobbo Saamaynaya Qaddiyad muran ka dhalisay DALKA oo lagaga hadlayey Shirweyne markii u horeysay Somaliland ka qayb-gashay | Somaliland Post
Home News Qodobbo Saamaynaya Qaddiyad muran ka dhalisay DALKA oo lagaga hadlayey Shirweyne markii...
Qodobbo Saamaynaya Qaddiyad muran ka dhalisay DALKA oo lagaga hadlayey Shirweyne markii u horeysay Somaliland ka qayb-gashay
Daaresalam (SLpost)- Wefdi uu hoggaaminayo Wasiirka Khaarajiga Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa ka qeyb galay shirka 4aad ee loo qabto dalalka Islaamka ee Qaradda Afrika oo Somaliland markii ugu horeysa lagu casuumay.
Shirkan waxa lagaga hadlayay sidii dalalka Qarada afrika ee Islaamka ahi ay u dhiiri gelin lahaayeen maalgelin ku dhisan nidaamka islaamiga ah ee loo yaqaan(Islamic Finance) iyo sidii loo fududeyn lahaa shuruucda baananka islaamka ee dalalkaasi.
Sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland oo war qoraal ah ka soo saartay shirkan, waxa shirkaasi ka qayb-galay in badan dalalka Islaamka ah ee qaraada Afrika oo ay Somalilandna ka mid tahay.
Wefdiga wasiirka waxaa ku weheliyay Gudoomiyaha Hayada Qurbjooga JSL Mudane Abdi Cabdilahi Xirsi iyo Agaasimaha Siyaasadda ee Wasaaradda Khaarij-ga Somaliland Mudane Cabdiqani Axmed Xassan (Goole).
“Waxa xusid mudan dadkii meesha joogay oo ay soo jiidatay markii Wasiirka Arrimaha Dibeda Somaliland uu la wadaag in barlamaanka Jamhuuradda Somaliland ay ansixiyeen Xeerka Bananka Islaamka XEER LR.55/2012 oo Maxaweynahay Jamhuuryada Somaliland uu saxeexay dhaqan gelinta xeerkaasi 2012 bishii 10/03/2012.
Gaba gabadii shirkaasi waxaa shahaado sharaf la gudoonsiiyay Wasiirka Arr.ddibedd JSL iyo xubnihii la socday ee wefdigaasi
Wefdiga uu Hogaaminaya wasiirka Sacad Cali Shire ayaa waxaa la filayaa in ay kulamo kala duwan la yeeshayan dawlada Tanzania gaar ahaan Wasiirka Arrimaha dibeda Tanzania Ambassador Augustine Mahiga. Waxa kaloo la filaya in wefdigu kulan balaadhan la yeeshaan jaliyadda Somaliland ee ku dhaqan dalka Tanzania,” Sidaas ayaa lagu sheegay war-saxaafadeedka wasaaradda Arrimaha Dibadda.
Madax-Sharafeedkii halkaasi ka hadlay waxaa ka mid ahaa
-Wasiirka Arrimaha dibedda&Isk. Caalamiga ah ee Somaliland Dr. Sacad Cali Shire
-Kaaliyaha xafiiska Madaxweynaha Tanzanaia H.E Faustin Kamuzora
-Safiirka dalka sudan u fadhi Tanzania H.E Mahgoub Ahmed
-Safiirka dalka Pakistan u fadhi Tanzania H.E Amir Khan
-Gudoomiye –ku Xigeenka Hayada Cameysika Tanzania H.E Saqware
Dhammaan madaxdaasi waxay hoosta ka xariiqeen ahmiyada ay leedahay in la dardar geliyo nidaamka maalgelinta bangiyada islaamiga ah, sida lagu sheegay war-saxaafadeedka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Somaliland.
Somaliland ayaa muddooyinkii u dambeeyey waxa ka taagnaa hirgelinta bangiyo caalami ah oo kuwa Islaamiga ahi ku jiraan, kuwas oo dalka ka hawl-gala iyo sidoo loo abuuri lahaa shuruuc xakamaynaysa nidaamka shaqo ee baanankaas oo ka hor-imanayn diinta Islaamka.